Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọrụ ụgbọ elu Etiopia dị mma na Edge?
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ọnọdụ agha obodo na Etiopia na-akawanye njọ kwa ụbọchị. Ụgbọ elu Etiopia bụ akara mpako maka ndị Africa. Egwu e mere megide ọkwa nchekwa nke ET na-atụ ọtụtụ ndị nọ na kọntinent ahụ na ụwa nke ụgbọ elu. Ọ bụkwa ihe iyi egwu nye ọtụtụ akụ na ụba Africa.
Ndị Africa agaghị echefu ihe mberede ụgbọelu Boeing 737 Max n'ime ya Ethiopia na otú ụlọ ọrụ mgbasa ozi Western si jiri ọsọ na-ata ndị ọkwọ ụgbọ elu Etiopia ụta! Taa, a kwadoro Boeing bụ onye ikpe mara, na ụda na mgbasa ozi agbanweela.
Taa United States na-adọ ndị na-anya ụgbọ elu aka ná ntị banyere ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Addis Ababa ka ha ghara ịdị ize ndụ n'ihi ike ọkụ nke TPLF TerroristGroup! O nweghị otu ndị ji egbe nwere ike ịbata Addis Ababa! O nweghị òtù ji ngwá agha nwere ike ime otú ahụ.
Nke a na ọtụtụ ozi ndị ọzọ na-ejupụta ọwa soshal midia. Eziokwu ka dị na United States iNdị na-anya ụgbọ elu na-adọ aka na ntị na ụgbọ elu ndị na-arụ ọrụ n'otu ọdụ ụgbọ elu Africa kacha na-ekwo ekwo nwere ike “kpughere ya ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè n'ime ngwa agha ala na/ma ọ bụ ngwa agha elu na ikuku” dị ka. Agha Etiopia nso isi obodo, Addis Ababa.
Ndị Etiopia nọ na nsọtụ n'ihi ịdọ aka ná ntị United States na ịdọ aka ná ntị America maka ndị America ka ha pụọ ​​​​na obodo ahụ.
Ozi bụ: Ejila Ụgbọ elu Etiopia. Tweets na-ekwu na ebumnobi ya bụ America imebi akụ na ụba Etiopia. Nke a bụ agha na-ekwupụtaghị nke USA!!!
Ndụmọdụ nke Federal Aviation Administration nyere na Wednesde na-ezo aka na "ọgụ na-aga n'ihu" n'etiti ndị agha Etiopia na ndị agha sitere na mpaghara ugwu Tigray nke gburu ọtụtụ puku mmadụ n'ime otu afọ nke agha ahụ. US n'izu a gwara ụmụ amaala ya nọ na Etiopia ka ha "pụọ ugbu a," na-ekwu na e kwesịghị ịtụ anya nchụpụ ụdị Afghanistan.
Mgbalị ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji kwụsị ọgụ ahụ ezutewo nkwụsi ike, mana onye isi ala Kenya gwara onye odeakwụkwọ nke United States Antony Blinken na Wednesde na praịm minista Etiopia na nzukọ na Sọnde nyere echiche na ọ dị njikere ịtụle ọtụtụ atụmatụ iji mee ka esemokwu kwụsịlata ma belata ime ihe ike, a. Onye isi ụlọ ọrụ steeti kwuru.
Ka ọ dị ugbu a tweet sitere na Etiopia na-achọ ka US kwụsị ịtụ ndị mmadụ ụjọ, na-ekwu na Addis Ababa adịghị mma.
Tweet ndị ọzọ na-atụ aro ka African Union dị na Addis Ababa kwakọba ma kwaga mba Africa ọzọ.
Onye isi oche nke njem nlegharị anya nke Africa Cuthbert Ncube "M wee si Etiopia fega na Addis Ababa ọtụtụ ugboro n'ime ụbọchị ole na ole gara aga ma zute ndị ọrụ ụgbọ elu." Enweghị ihe egwu dị nso, ekwesịrị ntụkwasị obi na ndị isi ụgbọ elu Etiopia na mkpebi ha iji rụọ ọrụ ụgbọ elu ahụ n'enweghị nsogbu.
"Atụrụ m anya na a ga-ezere mmụba ọzọ nke esemokwu obodo"
freddy L kober ekwu, sị:
November 21, 2021 na 13: 34
Ọtụtụ puku mmadụ egbuola ugbua. Tplf fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Addis Ababa ha dị ihe dịka 100 kilomita site na ya. Ndị agha Libartion Oromo na-anọdụ ala na mpụga isi obodo na-eche Tplf ka ha nwee ike bata n'isi obodo n'akụkụ dị iche iche. Ọzọkwa ha na-ejide ndị Tigraị nọ n'isi ụlọ ọrụ mana ha na-ekwu na ọ dị mma.
PM bi lala land ụgbọ ya na-emikpu, o ga-ewedata ndi mara mma ya na ha.
Jenny Brown ekwu, sị:
November 21, 2021 na 05: 16
Ya mere, gịnị mere n'ụwa ga-eji na-eche na ịfefe n'ógbè agha adịghị ize ndụ? Anyị nwere ike ịhụ.
November 21, 2021 na 05: 15
Ya mere, gịnị mere n'ụwa ga-eji na-eche na ịfefe n'ógbè agha adịghị ize ndụ? Anyi bu onye nzuzu oha na-efe efe?